Umthandazo ku-iemanjá. ? Fikelela iinjongo zethu kunye nemiceli mngeni.
Umthandazo ku-iemanjá Kutheni kubalulekile ukwenza a Umthandazo kuYemanja? Ukuthandaza kubalulekile, hayi i-Yemanja kuphela, kodwa nezinye izithixo, uhlala uhambelana nenkolelo yakho. Emva kwayo yonke loo nto, kungenxa yemithandazo esiyicelayo kwaye siyabulela izidalwa eziphakamileyo esinokholo kuye. Sifuna isibindi kwaye amandla ukujongana nemiceli mngeni yethu kunye nokufezekisa iinjongo zethu.
1 Umthandazo ku-iemanjá-uKumkanikazi woLwandle
1.1 Iingcebiso zokuthandaza e-Yemanja
1.2 Umthandazo kuYemanja: Ndifuna ukuphumelela uthando
1.3 Umthandazo oya e-Yemanja: umnqweno okhethekileyo
1.4 Thandaza kuYemanja ukuba uvule indlela
Umthandazo ku-iemanjá-uKumkanikazi woLwandle
I-Iemanjá ayibalulekanga kuphela kubalobi, kuba yenye yeOrixás ezidumileyo eBrazil. Inani labazinikeleyo likhulu ngendlela emangalisayo kwaye abalandeli bakhe bayamhlonipha minyaka le, ngoFebruwari 2, ngokuthathelwa ingqalelo njengosuku luthixokazi. Ke ngoko, nawuphi na umbhiyozo, umthandazo, isicelo okanye umthandazo ku-iemanjá unamandla ngakumbi xa usenziwa ngalo mhla.
Iingcebiso zokuthandaza e-Yemanja
Kukho iingcebiso ezenza kube lula ukwenza oko imithandazo yeNkosikazi yoLwandle yifikele ngokukhawuleza. Umzekelo:
Khetha usuku lokuphumla ukubeka i-odolo yakho okanye umbulelo, ngokukhethekileyo ngoMgqibelo
Beka isibingelelo kuye
Sebenzisa ithawula eliluhlaza eliluhlaza elifanekisela ulwandle.
Amakhandlela aluhlaza kunye namhlophe
Nxiba iimpahla ezikhanyayo, eziluhlaza namhlophe.
Ukuba kunokwenzeka, beka umfanekiso ka-Orixá
Yenza isicelo ngokucothayo, ulungelelanise kwaye usiphinde kwakhona ukuze senzeke ngokukhawuleza.
Ngoku jonga phantsi njenge Umthandazo kuYemanja Inokukunceda ebomini bakho.
Umthandazo kuYemanja: Ndifuna ukuphumelela uthando
Owu! I-Yemanja, intle yolwandle. Ingoma emnandi, ukuzola kwabaxhwalekileyo. Mama wehlabathi, yiba nenceba kuthi. Zisikelelwe iintsikelelo ezivela kubukumkani bakho. Intliziyo yam nomphefumlo uvulekile ukuze wamkele iintsikelelo zakho. Umama okhuselayo, oxhasayo, osusa zonke iintlungu. Umama ka-Orixás, umama okhathaleleyo okhathalele abantwana nabantwana babantwana bakhe. Iemanjá, ukukhanya kwakho kukhokela iingcinga zam kwaye amanzi akho ahlamba intloko yam.
Jonga kwakhona uvelwano ngeYemanja enokukunceda ufumane uthando kwakhona.
Umthandazo oya e-Yemanja: umnqweno okhethekileyo
Umama kaThixo, umkhuseli wabalobi kunye nomphathi wobuntu, usinike ukhuseleko. Ewe Mnandi Iemanjá, ucoce ii-auras zethu, usihlangule kuzo zonke izilingo. Ungamandla endalo, intokazi intle yothando nokulunga (yenza ukuthanda). Sincede ngokukhuphela izixhobo zethu kwizinto zonke ezingcolileyo kwaye i-phalanx yakho isikhusele, isinike impilo kunye noxolo. Makwenziwe ukuthanda kwakho ngale ndlela. Odoyá!
Thandaza kuYemanja ukuba uvule indlela
Isichotho, Starfish, Unamandla kaThixo, umama nommeli wabo bonke abahamba ngolwandle ebomini!
Kukhuseleko lwakho oluxabisekileyo, sinike abancedisi bakho, i-mermaids, i-nymphs, iikhabhathi zolwandle, ukuba zibe ngabakhokeli bethu, abakhuseli, intuthuzelo kunye nenkuthazo ngexesha lesiphango sobomi basemhlabeni.
Sithatha indawo yokusabela egcwele ukuzithemba kunye nokholo kwi-aura yakho kunye nakwi-cape yakho esebenzayo.
Yiba sisikhokelo sethu, ube sisikhonkwane sethu kwaye uhlale usiba likhanya lethu lobuthixo elisikhokelayo, ukuze singaze sitshabalale okanye siphulukane nekhondo eliqinisekileyo eliza kusiphambukisa kulwandle olunzima lobomi bezinto ezibonakalayo.
Yamkela ukuzinikela kwam okuthobekileyo njengophawu lothando kunye nethemba lam, ukuze ndihambe kwindlela yobomi ngengqondo nomzimba ocacileyo ngaphandle kolwelo olubi olunokuthintela imisebenzi yam. Bayibenjalo."
Ngaba ukhe wathandaza kuYemanja? Ngaba iyasebenza? Sixelele kumagqabantshintshi.